पुल-आउट स्प्रेयरको साथ क्रोम किचन सिंक नल
घर / भान्साको नल / भान्साको नलिका बाहिर तान्नुहोस् / WOWOW क्रोम किचन सिंक नल पुल-आउट स्प्रेयरको साथ
WowOW क्रोम किचन सिंक नल पुल-आउट स्प्रेयरको साथ
रेटेड 4.955बाहिर आधारित 37 मूल्यांकन ग्राहक
किचनको नल एकल ह्यान्डलमा खरीद गर्नुहोस् एक स्वचालित वापसी समारोह। पुल नलको फिर्ता कार्य समारोह मुख्यतया गुरुत्वाकर्षण बलबाट प्राप्त हुन्छ (जसलाई गुरुत्वाकर्षण खण्ड र गुरुत्वाकर्षण हथौडी पनि भनिन्छ)।
2310800C स्थापना निर्देशन
किचेन मिक्सर ट्यापहरू तल तान्नुहोस् 2310800C
क्लासिकल क्रोम पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापको लागि हेर्दै हुनुहुन्छ? अब खोज्नुहोस्! WOWOW ले तपाईंलाई एक उत्तम शास्त्रीय र अझै समकालीन पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापहरू प्रदान गर्दछ जुन तपाईं बजारमा फेला पार्नुहुनेछ। यसको लागि पैसाको मूल्य अपरिवर्तित छ, किनभने WOWOW लाई थाहा छ कि कसरी एक उच्च किफायती मूल्यमा उच्च गुणवत्ताको किचन मिक्सर ट्यापहरू बनाउने। यसका साथै यसको अनौंठो डिजाईनले WOWOW को पुल डाउन किचेन मिक्सरलाई कुनै पनि भान्छामा आँखा क्याचर बनाउँदछ। जब तपाईं शास्त्रीय किचन डिजाइन, वा आधुनिक भान्साको डिजाईनको लागि छनौट गर्नुहुन्छ, यो पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्याप यसमा ठिक हुनेछ।
प्रत्येक चोटि WOWOW का डिजाईनरहरूले किचेन मिक्सर ट्यापहरू तल तान्न डिजाइन गर्दछ जुन प्रायः मानिसहरूलाई चकित पार्दछ। WOWOW ले मात्र आँखा समात्ने किचेन मिक्सर ट्यापहरू डिजाइन गर्न चाहन्छ जुन कुनै पनि भान्छामा फरक पार्दछ। केही व्यक्तिले किचन मिक्सर ट्यापहरूको प्रभावलाई हल्कासित लिन्छन्, किनकि तिनीहरूले कुनै पनि भान्छामा ठूलो फरक पार्छन्। किचन मिक्सर ट्यापहरूले कुनै पनि भान्सामा विशेष छुनुहोस्। WOWOW मा डिजाइनरहरू यसको बारे अत्यधिक सचेत छन्। कुनै चीजको लागि होइन WOWOW को पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापहरू विश्वभरि ग्राहकहरूको लागि बेचिन्छ।
व्यावहारिक तान्नुहोस् किचन मिक्सर ट्यापहरू
WOWOW को किच डाउन किचेन मिक्सर ट्यापले सुविधा दिन्छ कि पानीको नली सजीलो किचिन मिक्सर ट्यापबाट बाहिर तान्न सकिन्छ। यसले सामान्य रूपमा तपाईंको फ्ल्यासिंग क्षेत्र बढाउँदछ अर्को १ to देखि २ inch इन्चको साथ। पठाउन योग्य पानीको नली सजीलै बाहिर तान्न सकिन्छ, तपाईंको धुलाई क्षेत्र नाटकीय रूपमा वृद्धि गर्न। तपाईको भान्साको डु s्गाको प्रत्येक कुना, जुन तपाईंको स्थिर किचन मिक्सर ट्यापको साथ पुग्न पहिले गाह्रो थियो, अब सजिलै सफा गर्न सकिन्छ। पानीको नली सजीलो तान्न सकिन्छ र यसको प्रयोग पछि, यो स्वचालित रूपमा आफ्नो मूल स्थितिमा फिर्ता जान्छ।
व्यावहारिक पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापको WOWOW को अर्को उत्कृष्ट सुविधा कुंडा ट्याप हो जुन degrees 360० डिग्री सार्न सक्दछ। यसले यी पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापलाई विशेष गरी डबल किचन सिंकको लागि आदर्श बनाउँदछ। यस तरिकाले यो सजिलैसँग एक अर्को भान्साको सिinkबाट अर्को बदलिन जान्छ। यसले यी पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापहरू अपरेट गर्न सहज महसुस गर्दछ किनकि WOWOW ले पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापमा उच्च गुणस्तरको सामग्री प्रयोग गर्दछ। तपाईंले तुरून्त फरक देख्नुहुन्छ जब तपाईं WOWOW को किचन मिक्सर ट्याप सञ्चालन गर्नुहुन्छ।
--मोड तान्नुहोस् किचन मिक्सर ट्यापहरू
WOWOW को पुल डाउन किचन मिक्सर ट्यापहरू एक एकल उच्च-स्तरको लीभर द्वारा संचालित गर्न सकिन्छ। न्यानो र चिसो पानी मात्र एक हातले मिसाउन सकिन्छ आदर्श तापमान नपुगुन्जेल। र त्यो पानीको मात्रामा पनि लागू हुन्छ। यस तरीकाले तपाईले एक हात सँधै अन्य किचेन कार्यहरू गर्न स्वतन्त्र राख्नुहुनेछ। ड्रिप-फ्री सिरेमिक कार्ट्रिज इष्टतम प्रदर्शनको ग्यारेन्टी गर्दछ। यसको सिलिंगको कारण, लीभर सजिलै घुमाउँदछ र कुनै पानी बहाव वा चुहावट बिना दीर्घकालीन प्रयोग सुनिश्चित गर्दछ। र सबै भन्दा माथि, यसले बिना कुनै पछाडि पानीको तापक्रमको सही र चरणविहीन नियन्त्रणको ग्यारेन्टी पनि दिन्छ।
WOWOW को पुल डाउन किचन मिक्सर ट्यापले तीन-प्रकारको किचन मिक्सर ट्याप प्रस्ताव गर्दछ। नियमित स्ट्रिम पानी मोड बाहेक, तपाईं स्प्रे मोड वा एक्वा ब्लेड मोडको लागि पनि छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। यो एक्वा ब्लेड मोडले तपाईंलाई धेरै कडा पानी जेट प्रदान गर्दछ, जसले सजिलैसँग सबै खानाको मलबेहरू प्लेटहरू वा भान्छाको सिink्कबाट नै फ्लश गर्न सक्छ। यो प्रकार्य बजारमा अद्वितीय छ र निश्चित रूपले पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापको एक फाइदा हो WOWOW को अन्य पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापहरूमा। तपाईं केवल बटनको एक टचमा पानी प्रकार्यहरू स्विच गर्न सक्नुहुनेछ, जुन सजीलो किचन मिक्सर ट्यापको स्प्रे हेडमा स्थित हुन्छ।
उच्च गुणस्तरको कुचिन मिक्सर ट्यापहरू तल तान्नुहोस्
पहिले नै उल्लेख गरिए अनुसार, WOWOW गुणस्तर पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापको महत्त्वबाट राम्ररी जान्दछ। यसैले WOWOW ले उच्च-गुणवत्ताका सामग्रीहरू प्रयोग गर्दछ जुन समग्र उद्योग मापदण्ड भन्दा बढी छ। प्रीमियम सतह इलेक्ट्रोप्लेटि processes प्रक्रियाहरू, नियोपरल एरेटर जस्ता विश्व प्रसिद्ध फिटिंगहरू, र ठोस धातु सामग्रीहरूका बारे सोच्नुहोस्। केवल सुनिश्चित गर्न तपाई लामो समय उपयोगको लागि सबै भन्दा राम्रो प्रदर्शन उत्पादन प्रयोग गर्न। त्यसकारण WOWOW ले तपाईंलाई यसको पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापमा3बर्षे उत्पाद वारंटी पनि प्रस्ताव गर्न सक्दछ। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, WOWOW मा हामी निश्चित छौं कि तपाईं हामीतर्फ फर्कने क्रम जारी राख्नुहुनेछ, किनभने हाम्रा धेरै जसो ग्राहकहरू जीवनका लागि वफादार ग्राहकहरू रहन्छन् किनभने हामी प्रस्ताव गर्दछौं पैसाको उदात्त मूल्यको कारण।
हटाउन सकिने नुहाउने हेड उच्च-गुणस्तरको पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापहरू हटाउन वा प्रतिस्थापन गर्न सजिलो छ। यस तरीकाले तपाईं सफा गर्न सक्नुहुनेछ र यस मिक्सर ट्यापको स्प्रे हेड सजिलैसँग कायम राख्न सक्नुहुन्छ, र स hard्कलन गर्ने समयको सबै कडा पानीको अवशेषहरू हटाउन सक्नुहुन्छ। WOWOW को पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्याप विशेष गरी उच्च दबाव प्रणालीको लागि उपयुक्त छ। लचिलो सिलिका जेल पानी नली यसैले पनि एक सहज अपरेशन र लामो जीवन धीरज प्रदान गर्दछ।
किचेन मिक्सर ट्यापहरू तान्दै स्थापना गर्दै
WOWOW को पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्याप या त १ वा hole प्वाल भान्साको डेकमा स्थापना गर्न सकिन्छ। डेक माउन्ट गरिएको पुल डाउन किचन मिक्सर ट्यापहरू पूर्ण स्थापना किटको साथ वितरित गरियो। धातु डेक माउन्ट गरिएको कभर प्लेटको साथ सबै प्वालहरू ढाकिएका हुन्छन्, त्यसैले तपाईं एक सुरक्षित रूपमा स्थापित पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापको सुनिश्चित हुनुहुनेछ। यी पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापहरू आफैंमा स्थापना गर्न सक्षम हुन, सबै हार्डवेयर प्याकेजमा समावेश छ। तपाईं हावा जस्तो पुल डाउन किचन मिक्सर ट्याप स्थापना गर्न सक्नुहुनेछ। असेंबली भिडियोको साथ तपाईं easily० मिनेट भन्दा कममा सजीलै स्थापना सक्नुहुनेछ। यसले तपाइँलाई महँगो प्लम्बर बचत गर्दछ!
मानार्थ3बर्षे ग्यारेन्टी अवधि जुन WOWOW ले तपाईंलाई प्रदान गर्दछ जब तपाईं यी पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापहरू खरीद गर्नुहुन्छ, WOWOW ले तपाईंलाई 90 ०-दिनको पैसा फिर्ता-ग्यारेन्टी पनि प्रदान गर्दछ। यदि तपाईं यी पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापहरू खरीद गरेर प्राप्त गर्नुभएको पैसाको मूल्यबाट प्रभावित हुनुहुन्न भने, तपाईं पुल डाउन किचेन मिक्सर ट्यापलाई कुनै समस्या बिना नै फर्काउन सक्नुहुन्छ। कुनै प्रश्न सोधे बिना तपाईं पूर्ण फिर्ती पाउनुहुनेछ।
संक्षेपमा पुल डाउन किचन मिक्सर ट्यापका फाइदाहरू:
Any कुनै पनि भान्छामा एक वाह वाहक दिनुहोस्
Ic क्लासिक र अझै समकालीन डिजाइन
Pressure water पानी मोडहरू, उच्च दबावको एक्वा-ब्लेड सहित
High उच्च गुणस्तरको सामग्रीबाट बनेको
Do यो गरिरहनु भएकोमा आफैंको स्थापना किट पनि समावेश छ
। 90-दिन पैसा फिर्ता ग्यारेन्टी
SKU: 2310800 XNUMX१C विभाग: भान्साको नल, भान्साको नलिका बाहिर तान्नुहोस् टैग: H होल, क्रोम, तल तान्नु
तीन मोड: स्वीप मोड / स्ट्रिम मोड / स्प्रे मोड
वस्तु प्याकेज मात्रा
स्टेनलेस स्टील / जिंक जिंक / ब्रास
भान्सा सिink्क नल; Cm० सेमी सेतो र चिसो पानी होज; स्प्रेयर तल तान्नुहोस्; डेक प्लेट; आरोहण सहायक उपकरणहरू
हाम्रो छोटो / कम नल कोज प्रतिस्थापन गर्न यो भयो हामीसँग गाह्रो समय धुँदै गइरहेका भाँडाहरू छन् जुन अग्लो / अग्लो र सबै कुरा राम्रो छ..तब मैले स्विच गरेको चीज मात्र तातो र चिसो को लागी स्थापना छ पूर्वनिर्धारित तपाईं तिर तानिन्छ तातो र मलाई यो चाहिन्छ कि मसँग बच्चाहरू छन् यसैले मैले नीलो नलीलाई तातो भल्भमा रातो नलीलाई चिसो भल्भमा जोडे। सबै कुरा वास्तवमै ठूलो खरीद हो।
मैले मेरो पुरानो भान्छाको नल बदल्न आवश्यक छ, मूल्य राम्रो छ, त्यसैले मैले कुनै हिचकिचाहट बिना किनें। पुल-डाउन स्प्रेयर र settings सेटिंग्स शानदार छन्! एक धेरै सन्तुष्ट सौदा!
धेरै राम्रो देखिन्छ र महसुस गर्दछ।
मैले भर्खरको भान्सामा नल स्थापना गर्न समाप्त गरें। स्थापना गर्न सजिलो छ र पेशेवरलाई कल गर्न आवश्यक पर्दैन। स्प्रेयर नोजल तल तान्न सजिलो र यसलाई ह्यान्डलमा पछाडि छोड्नुहोस्। यो भर्खरै भयो मेरो आपूर्ति कनेक्शनहरू यस आकारको जस्तै आकारका छन्। मूल्य बिन्दुको लागि, यो धेरै राम्रो छ।
यस नलको तुलना ठूला नामहरू जस्तै मोर्न, डेल्टा, इत्यादिसँग गर्ने तुलनामा भावना र उपस्थिति तुलनात्मक छ। यस नल पानी दबाव र तापमान नियन्त्रण गर्न सजिलो छ।
मलाई यो मनपर्‍यो!
यो राम्रो सम्झौता हो र गुणस्तर बढी महँगो faucets.We रूपमा राम्रो छ। हामी यो नल हाम्रो भान्छा सि s्क मा स्थापना गरे। यो एक सजिलो स्थापना थियो र पछि निर्धक्क प्रदर्शन गरेको छ। समाप्त सफा गर्न धेरै सजिलो छ, खरोंचको प्रतिरोध गर्दछ। योसँग राम्रो स्प्रेयर सेटिंग छ र स्प्रेयरले राम्रो काम गर्दछ, कुनै चुहावट वा तल झुल्दैन। हामीलाई यो नयाँ नल मनपर्छ।
सबै समीक्षाहरू पढेपछि, मैले निर्णय गरेँ कि हामी यो नललाई प्रयोग गर्ने छौं। को लागी $$$ यो मौका लायक लाग्यो। वाह! हामी यस नल संग धेरै खुसी छौं। अझै पनी मूल्यको लागि विश्वास गर्न सक्दैन। म यो नललाई सिफारिश गर्दछ कसैलाई अपग्रेड गर्न को लागी बजेट मा होस् वा नहोस्। ठूलो मूल्य, उत्तम रूप। महान समारोह।
महान मूल्य को लागी महान नल! मैले हालसालै बुबाको ससुरालको लागि एउटा नल किनेको छु, ठूलो बाकस हार्डवेयर स्टोरबाट यस नलको मूल्यमा दुई गुणा बढी। म निश्चित रूपमा भन्न सक्छु कि यस नलको गुणवत्ता र स्थापना गर्न सजिलो पहिलेको खरीद गरेको भन्दा राम्रो थियो। यो पानी लाइनहरु संग आउँछ - सँधै तपाइँको पानी लाईनहरु बदल्नुहोस् !!! साथै वजन संलग्नक स्थापना गर्न सजिलो थियो। समग्रमा नलको साथ धेरै खुसी।
मेरो घर मर्मत गरिएको छ, त्यसैले मलाई यस नलको आवश्यक छ। स्थापना दिनका केही दिन पहिले। अपेक्षित रूपमा काम गर्दछ। कुनै गुनासो गर्न को लागी केहि यो एक साधारण उत्पादन हो तर यो राम्रो काम गर्दछ! वास्तवमा काउन्टरमा धेरै खाली ठाउँ खाली गर्दछु जब म केवल एक वा दुई वा एउटा डिश वाश गर्न चाहन्छु वा डिशवाशर-सुरक्षित नभएको चीजहरूको लागि।
म मूल्य मा एक सानो संशयवादी थियो र तथ्य यो एक ठूलो नाम ब्रान्ड थिएन। म सँधै प्लम्बि related सम्बन्धित फिक्स्चर ब्रेकिंगबाट डराउँछु, किनकि तपाईले हजारौं खर्च गर्नु पर्ने क्षति निश्चित गर्न को लागी एक अतिरिक्त $ २० वा product० उत्पादन बचत गर्न सक्नुहुनेछ। यद्यपि यो उत्तम उत्पादन हो! मेरो पुरानो अमेरिकी मानक ब्रान्डको नल थ्रेडेड घाँटीमा रस्टबाट भाँचियो। गस्केट केहि समयको लागि चुहावट भएको हुनुपर्दछ, र स्क्रूहरू पनि ममा टाँसियो। मैले पुरानो पानी लाइन काट्नु भएको थियो र बाँकी नल तोक्न यसलाई बाहिर निकाल्छु। त्यो एक दुःस्वप्नको प्रकार थियो, र यो आशा गर्दै थियो कि यो मैले भोग्ने कुराको पूर्वचित्रण नगरेको थियो। तर यो थिएन। यो स्थापना गर्न चिकनी नौकायन र सजिलो थियो। मेरो सिink्कमा तीन प्वाल सेटअप छ त्यसैले मैले बेस प्लेट प्रयोग गरें। मलाई बेस प्लेटहरू फोम गस्केटको सट्टामा पातलो प्लास्टिकको सट्टा तपाईले सामान्यतया पाउनुहुन्छ। जब म चीजहरू निचोल्दै थिए तपाईं देख्न सक्नुहुनेछ त्यो फोमले वास्तवमा चीजहरू मोहर लगाउँदछ र दृष्टिबाट गायब हुन्छ। म पक्का छु कि यो मेरो पुरानो जस्तो झर्नेछैन। मलाई पनि वास्तवमा फिनिश मनपर्दछ, यसले विज्ञापन रोक्दैन कि यो स्पट प्रतिरोधी हो तर यसले पानीको धब्बा वा फिंगरप्रिन्टहरू प्राप्त गर्दैन। हुनसक्छ किनकि यो स्टेनलेस हो र निकल होइन? म निश्चित छुईन, तर त्यो देखेर राम्रो लाग्यो र यस मूल्य बिन्दुमा अप्रत्याशित।
मसँग केवल चिन्ताको विषय हो जब म फोहोरमा तान्न थाल्छु खाली प्वाल / सिink्क फ्लेक्समा। यो मेरो सिink्क पातलो स्टेनलेस पनि हुन सक्छ। म मेरो सामानहरूमा असन्तुष्ट छैन त्यसैले म धेरै चिन्तित छैन तर यो त्यस्तो चीज हो जुन म दिशाहरूमा पछाडि राख्छु। (केवल केसमा सावधान रहनुहोस्।)
म कसैलाई सिफारिस गर्दछु! ठूला बक्स स्टोरमा नलमा किन $ १००… $ १$०… $ २०० खर्च गर्नुहुन्छ जब तपाईं यसलाई मूल्यको भिन्नताको लागि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ ??
S *** ई2020-05-04
यो उत्पादन किन्नु अघि, मैले अन्य ग्राहकहरूबाट नराम्रो अनुभवहरूका बारे समीक्षाको संख्या पढें जसले यो उत्पादन ल्याए। जहाँसम्म, मैले यसलाई प्रयास गर्ने निर्णय गरें र अहिलेसम्म (प्रयोगको केवल) दिन) सबै कुरा एकदम राम्रो काम गरिरहेको छ कुनै लीकमा यसको लीक हुँदैन।
म स्वीकार गर्दछु, मैले स्थापनासँग अलि स .्घर्ष गरें, तर त्यो यस उत्पादनको गल्ती थिएन। निर्देशनहरू एकदम स्पष्ट थिए, मैले भर्खरको मेरो सपनाको कारणले गर्दा मेरो सबै पुरानो प्लम्बरिंग काटिएको र हटाइएको थियो। एक पटक मैले त्यो अवरोध पार गरें, नयाँ नल स्थापना धेरै सजिलो थियो।
जहाँसम्म प्रदर्शनको रूपमा, फराकिलो स्प्रे हेडले मेरो लागि ठूलो दबाब राख्छ। जहाँसम्म, "स्ट्रिम" सेटिंग मा दबाब अलि कम देखिन्छ। मलाई थाहा छैन यदि यो नल वा मेरो पानी आपूर्तिको समस्या हो। जे भए पनि, यो कुनै ठूलो चिन्ताको विषय होइन किनकि म यसलाई व्यापक स्प्रे सेटिंगमा जे भए पनि राख्न चाहान्छु।
जे भए पनि, समग्रमा मैले यो उत्पादनलाई उच्च मूल्यको कारण मूल्या ,्कन, सजिलो स्थापना, र उत्तम हेराईको कारण। यदि भविष्यमा मलाई कुनै समस्या छ भने, म यसलाई समीक्षाको साथ अपडेट गर्न अपडेट गर्नेछु।
यदि तपाइँ कुनै ठाउँ भाँडामा लिदै हुनुहुन्छ भने यो मानक सिink्क नलबाट अपग्रेड गर्ने उत्तम तरिका हो जुन भाँडासँग आउँदैन। तपाईं पुरानो नल तपाईं छोड्न अघि फिर्ता राख्न सक्नुहुन्छ। यो नल, स्विच गर्न को लागी एकदम सजिलो थियो, यसले हब्बीलाई कुनै समय दिइन। भान्साकोठामा आएको हाम्रो सिink्कमा कुनै स्प्रेयर र छोटो टाउको थिएन जुन सिink्कको भित्र एकदमै नजिकै बस्यो भने सिink्कमा थोरै भाँडा माझ्ने वस्तुहरू भए पनि त्यसलाई धुनु गाह्रो थियो। यस नलले घुमाउरो तरीकाले माथि हामीलाई धेरै कोठा दिन्छ, साथै यसमा स्प्रेयर पनि छ जुन आधुनिक समयमा सबै नल / सिks्कका लागि मानक हुनुपर्दछ। यो पक्कै एक खेल परिवर्तनकर्ता थियो, सफा गर्न सजिलो बनायो, र स्विच गर्न सजिलो छ यदि हामी हाम्रो भाडाबाट बाहिर सर्छौं र हाम्रो जम्मा फिर्ता चाहन्छौं भने।
भाँडामा केहि अपग्रेडहरू शीर्षमा राख्न यो किन्नुहोस्।
सामान्यतया पुल डाउन faucets को यस प्रकार को homedepot र लोवस बाट $ १०० हो त्यसैले म शpt्कास्पद थिए यो राम्रो गुण हुनेछ।
मलाई भन्नुपर्दछ कि म पैसाको लागि गुणस्तरबाट धेरै प्रभावित छु, नल तान्नको लागि तौल धेरै गहन हुन्छ। दुई मोडहरू शानदार काम गर्छन् तर पज बटनले यसमा केही किक गर्‍यो जुन मैले समर्थन प्रेस सुन्न सक्छु। पाइप तर पर्याप्त छैन म वास्तवमै यसको बारेमा चिन्तित छु।
यस मूल्य बिन्दुमा धातु निर्माण धेरै प्रभावशाली छ र कुनै पनि कम्पोनेन्टहरू कमजोर महसुस गर्दैनन्।
स्थापना सजिलो छ, केवल चुनौतीपूर्ण हिस्सा स्क्रू हो जुन सिink्क मुनि मुनि जोड्छ। यदि तपाईंसँग एक संचालित स्क्रूड्रिभर वा लाइटवेट ड्रिल छ भने यो कुनै मुद्दाको विषय होईन।
समग्रमा यो केहि चीज हो जुन म निश्चित रूपमा मेरो अर्को भाडाको लागि फेरि किन्नको लागि हेर्ने छु जुन यो समयको परीक्षा हो।
अर्को इकाईको लागि एक दोस्रो किन्नुभयो, स्थापना एकदम सजिलो थियो र सिंकको मुनि माउन्टिंग स्क्रू कडा बनाउनको लागि एक शक्ति ड्रिलको साथ करीव min० मिनट लिनुभयो।
हाम्रो सिink्क धेरै गहिरो छैन र म भाँडा माझ्ने सजिलो तरीका चाहान्छु। मलाई वास्तवमै मनपर्दछ कि यसमा २ सेटिंग्स - स्ट्रिम र स्प्रे छन्! मैले यसलाई (अवरोधहरूको साथ) एक घण्टा भित्र राम्रोसँग स्थापना गरें। लक गर्ने कलरमा एउटा खुल्छ जुन यसले होजलाई सर्प नगरीकन यसलाई जान अनुमति दिन्छ। स्थापनाको लागि एउटा राम्रो सुविधा होजहरू निलो र रातोसँग चिन्ह लगाईन्छ, हुकअपलाई एक ब्रीज बनाउँदछ। म बक्स स्टोरहरूलाई हेर्दै छु यस प्रकारको नलको लागि। तुलनात्मक इकाईहरूमा मूल्यहरूले मेरो बजेटको सीमा तोक्दै थियो। यस नलसँग मैले चाहेका सबै सुविधाहरू छन् र ठोस राम्ररी निर्मित उत्पादन हो। ठूलो मूल्य, महान नल र म खुशी छु कि मैले यो खरीद गरें!
म यो नललाई स्थापना गर्न सजिलो मन पर्दछ कामहरू एकदम राम्रो फिट मेरो अपूर्ण किचेन सिink्कमा उत्तम फिट गर्दछ अरुलाई उपहारको रूपमा खरीद गर्न मनपर्दछ।
यस नलको उद्देश्य अस्थायी भान्छामा आउटफिट थियो जुन हामी हाम्रो नविकरण गर्दछौं। हामी यसलाई यति धेरै प्रेम गर्दछौं कि हामी यसलाई नयाँ ठाउँमा प्रयोग गर्नेछौं। धेरै कडा, गुणस्तरीय निर्माण, कुनै प्लास्टिकको बिट्स छैन। लम्बाई, स्थापित गर्न धेरै सजिलो, प्रयोग गर्न सजिलो, स्प्रे नोजलबाट राम्रो लचिलोपनको साथ। र सबै "नाम" ब्रान्डहरूको लागतको एक अंशको लागि, जुन प्राय: प्लास्टिकको धेरै जसो गरिन्छ। $$ को लागी उत्कृष्ट नल।
म थोरै चिन्तित थिएँ कि यो "सस्तो प्लास्टिक" जस्तो देखिन्छ तर यो छैन! म मेरो भान्साकोठा फेरि गर्दैछु र नल एकदम राम्रो देखिन्छ !!! मलाई मन पर्छ कि म पानीको चाप परिवर्तन गर्न सक्छु र पानीको बहाव रोक्न पनि सक्छु जब साबुनहरू पानीमा पकाउँछ जसले मेरो पानीको बिलमा पानी र पैसा बचत गर्दछ। मसँग डबल सिink्क छ त्यसैले यो ठूलो र सुविधाजनक छ।
यो वास्तवमै एक राम्रो राम्रो खरीद थियो। यो वास्तवमै स्थापना गर्न सजिलो थियो। सब भन्दा गाह्रो अंश अन्तिम फिक्स्चर हटाउँदै थियो किनकि यो यति पुरानो र सकल थियो। तर यो स्थिरता एकदम पातलो थियो, सँगै राख्न सजिलो थियो, र सायद मलाई करीव आधा घण्टा लाग्यो, सफा सहित, सम्पूर्ण कुरा बदल्नको लागि। प्रयोगको सहजता र तातो, चिसो, स्प्रे समारोह, र तान्न को लागी स्विच गर्न को क्षमता संग वास्तवमै खुसी। तौल बल स्मार्ट छ। यस टेकलाई माया गर्नुहोस् र कसरी हाम्रो नवीनताले जीवनको उत्तम र बढी किफायती स्तरमा धक्का दिइरहेको छ।
धेरै एकाई संग प्रभावित। फिनिश सुन्दर छ। म मात्र टिप्पणी गर्न को लागी ह्यान्डल धेरै संवेदनशील छ र एक नल खोल्दा एक होशियार हुनु आवश्यक छ किनभने तपाईं आवश्यक भन्दा थोरै बल लिन सक्नुहुन्छ। अन्यथा म कम्पनी र उनीहरूको उत्पादनमा गरेको अनुगमनबाट धेरै प्रभावित छु। आवश्यक छ भने फेरि खरीद गर्नुहोस्।
मलाई मेरो नयाँ नल मन पर्छ! मैले यो हिजो राति स्थापना गरें। पानीको लाइनहरु स्थिरतामा जोड्नु बाहेक यो गाह्रो थिएन। यदि तपाईं सक्नुहुन्छ भने, तपाईं नल ठाउँमा राख्नु अघि संलग्न गर्नुहोस्। मेरो गर्न अधिक गाह्रो थियो किनकि मेरो सिink्क मुनिको ठाउँ एकदमै साँघुरो भएको छ। यो बाहेक यो सजिलैसँग गयो र म नयाँ नललाई माया गर्दैछु!
म यस उत्पादन संग धेरै खुसी छु। यो स्थापना गर्न सजिलो थियो। हामीसँग साना बच्चाहरू छन् र तिनीहरूलाई प्रयोग गर्न पनि सजिलो छ। हामीले एक साथी समीक्षकको सल्लाह अनुसरण गर्‍यौं र तातो / चिसो जडानहरू स्विच गर्‍यौं ताकि तातो पछाडि र चिसो अगाडि तानिन्थ्यो। राम्रो काम गर्दछ र म निश्चित रूपमा यो उत्पादन सिफारिस गर्दछु !!
म अहिले केहि समयको लागि भान्छामा मेरो पुरानो नल बदल्न चाहन्छु। यो सेट एकदम सुन्दर छ र राम्रोसँग कार्य गर्दछ! यो स्थापना गर्न को लागी एक सानो कुटिल थियो (विशेष गरी भाग जब मैले सिinkक बेसिनमा कडा पार्नु पर्थ्यो - मैले कसैको सहयोगको लागि सोध्नु प ended्यो) तर अन्ततः मैले यो पाएँ र नलले ठूलो काम गर्छ! मलाई सिinkक बेसिन स्प्रे गर्नका लागि फिर्ता नलको टाउको मन पर्छ। सेट सेतो कपास ग्लोभजको जोडीको साथ आएको थियो यद्यपि तिनीहरू केका लागि निश्चित थिए। प्याकेजि very्ग धेरै राम्रो थियो, र म चारै तिर मेरो खरीदको साथ धेरै खुसी थिए!
जे *** ई2020-07-09
म वास्तवमा यस मूल्य मा एक नल यो राम्रो हुन को लागी आशा गरेन। म केहि मानिसहरु लाई सामग्री को प्लास्टिक को भावना को बारे मा गुनासो देखें। सामग्री विलासी महसुस गर्दैन तर त्यो हामी यो मूल्य मा एक उत्पादन को लागी आशा गर्न सक्दछ। सामग्री स्टेनलेस स्टीलको जस्तै महसुस गर्दछ तर त्यसभन्दा पनि हल्का हुन्छ। मात्र समयले जवाफ दिन सक्छ यदि यो टिकाऊ हो। नलको अरू अरू नलहरूको जस्तै विस्तार योग्य टाउको हुन्छ तर मलाई लाग्छ कि उनीहरूले स्प्रि use प्रयोग गरेनन कि टाउको अरूले झैं छिटो पछि हट्दैन। यद्यपि यो अझै ठीक काम गर्दछ। उत्पादन उत्तम अवस्थामा आइपुगेको, प्याकेजि pack्ग राम्रो थियो। अत्यधिक सिफारिश गर्नुहोस् यदि तपाईं एक सस्तो नल खोज्दै हुनुहुन्छ!
एच *** एम2020-07-13
म भर्खर नयाँ घरमा सरेँ र पुरानो भान्साको सिink्क पुरानो थियो र कोरियो र रस्ट भयो। मैले चित्रित गरेपछि, मैले यो नयाँ नलमा राखें। यसले आधुनिक मोड प्रदान गर्दछ र मलाई पुल डाउन स्प्रेयर मनपर्दछ। यो स्थापना गर्न सजिलो थियो (केवल दिशा निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्)।
यो सबै हेराई र सबै प्रकार्य हो। धेरै आकर्षक पनि। मानक क्रोम फिनिशबाट जाँदै, दुई ह्यान्डल, कम घाँटीको किचनको नल लगभग विपरितको लागि रमाइलो छ! मूल्य प्रतिस्पर्धी छ। पैतृक गर्न सजिलो। यो खरीद संग धेरै खुसी।
राम्रो, राम्रोसँग नल
निश्चित रूपमा सिफारिस गर्दछ
महान काम गर्दछ। मूल्यको लागि अद्भुत मान। म हाम्रो नललाई सँधै बाहिर परिवर्तन गर्न खोज्दै छु र यो कार्यशील छ र राम्रो देखिन्छ। स्प्रेयर झगडा गर्दैन। केवल यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं काउन्टर वजन ठीक छ।
नल एक राम्रो उत्पादन हो। स्थापना गर्न सजिलो छ यदि तपाईंको सिink्कको संरचनासँग काम गर्न सजिलो छ। मेरो लागि, यो स्थापना गर्न मलाई भुइँमा सुत्नु पर्छ। तर यो सार्थक छ।
यो मूल्यको लागि मैले भन्नु पर्ने छ म यो किन्नको बारेमा निश्चित थिइन तर मलाई पक्का विश्वास छ कि मैले त्यसो गर्नु भनेको आशा गर्नु भए जस्तै कामहरू स्थापना गर्न सजिलो थियो र तपाईको उच्च अन्त्यको नल जत्तिकै राम्रो थियो र मैले भन्नु पर्छ समीक्षा नलेख्नुहोस् किनकि म यो बिर्सन्छु यदि मैले यो लेख्न समय निकालेको भए यसको मतलब यो भयो कि यो यसको लागि लायक थियो र म बजेटमा अन्य मानिसहरूले तपाईंको घर ठीक गरेको बेलामा बैंक तोड्न ठीक छैन भनेर हेर्न चाहान्थे।
राम्रो नलको लागि ठूलो मूल्य। मलाई वास्तवमै "पज" सुविधा मनपर्दछ। यो स्थापना गर्न धेरै सजिलो थियो। यो दोस्रो नल हो जुन मैले यस कम्पनीबाट प्राप्त गरेको छु, र ती दुबै राम्रा छन्!
पैसाको लागि सभ्य नल। साधारण स्थापना, प्लम्बर ट्यापको आवश्यक पर्दैन, र कुनै चुहावट छैन। हामी एक बर्षमा सर्दै गइरहेका छौं र यो किचनको लागि सस्तो अपग्रेड हो
B *** ई2020-08-
मैले समीक्षा पढें र एउटा मौका लिएँ र मलाई पक्का विश्वास छ कि मैले गरे, यो हाम्रो भान्छाको लागि एउटा अपग्रेड अपग्रेड हो र ठूलो बक्स भण्डारहरूको तुलनामा यसको मूल्य अविश्वसनीय छ।
निश्चित रूपमा एक उत्कृष्ट खरीद। वास्तविक महँगो, उत्तम र उत्तम भान्सा देखिन्छ। विस्तार अद्भुत छ। समाप्त प्रेम। मेरी आमा यो चाहनुहुन्थ्यो र उनी सन्तुष्ट भन्दा बढी छन्।
गहिरो लुगा धुने सिंकलाई के चाहियो। उपकरणहरू स्थापना गर्न सजिलो एक समायोज्य रिन्च हो। फिलिप्स चालक। कुनै चुहिन हुक गरियो र विस्तृत खुशी छ।
जी *** एम2020-08-19
यस नलले मेरो भान्छालाई जीवनमा फर्कायो! राम्रोसँग निर्मित र स्थापना गर्न सुपर सजिलो! मसँग अहिलेसम्म शून्य लीक वा मुद्दाहरू थिए! म सिफारिश गर्दछु !
मलाई मेरो नयाँ नल मन पर्छ। मैले एउटा २ आफ्नो घरको लागि र एउटा मेरो आफ्नै अपार्टमेन्टको लागि किनें। तिनीहरू महान देखिन्छन् र awsome काम गर्छन्!
स्थापना गर्न सजिलो, तपाईले चाहानु भएको सबै थोक समावेश गर्नुभयो। पैसाको लागि ठूलो मूल्य, कम मूल्यले तपाईंलाई नराम्रो बनाउन नदिनुहोस्!
हामी सामान्य व्यक्ति हौं हामीसँग कुनै थप पाइपिंग छैन जस्तै पानी प्यूरीफायर प्रणाली - यो एक सजिलो स्थापना छ। मसँग बाटोमा तखता पनि छ ताकि तौल जान सकिन जहाँ यो वास्तवमा सम्बन्धित छ यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो सिink्क भित्र हुनुहुन्छ स्पष्ट छ यसले काम गर्न सजिलो बनाउनेछ। नल सुन्दर देखिन्छ र राम्ररी डिजाइन गरीएको छ। म बिल्कुल यो प्रेम गर्दछु
मैले यो नल मेरो किचनको सि update अपडेट गर्नका लागि किनेको हो। मैले कसैलाई मेरो लागि यो स्थापना गर्न भुक्तान गरें जुन मलाई खुशी छ। म आसपास पसल सुन्दर नल
WOWOW मैट कालो पुल-डाउन स्प्रे किचन नल